Nosy-Be Hell Ville Mitotongana ny vidin’ny Ylang Ylang
Vokatra isan’ny mampiavaka an’i Nosy Be Hell Ville ny Ylang Ylang. Mitotongana tanteraka ny vidiny amin’izao fotoana izao noho ny resaka valan’aretina Coronavirus.
1 000 Ariary no ividianan’ny mpanangom-bokatra ny iray kilao amin’ny felana Ylang Ylang amin’izao fotoana izao. 500 Ariary aza amin’ny toerana sasany, raha toa ka 6 000 Ariary izany teo aloha, raha ny vaovao azo. Voalaza fa betsaka ny tolotra noho ny tinady, ka izay no mampitotongana ny vidiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Efa mifaninana amin’i Nosy Be ihany koa amin’izao ny vokatra avy atsy amin’ny nosy Mayotte ary Comores, raha ny fanampim-panazavana. Ny Ylang Ylang moa dia ampiasaina indrindra amin'ny ranomanitra, na fanomezana fofona tsara ny savony, shampoing, na hanaovana “huile essentielle”. 45 euros na 190 000 ariary eo ny 100 ml ny « huile essentielle 100% pure » vita amin’ity akora ity.